Izinto ezenziweyo kwiveki ye-Daytona Bike - Street Street
I-Street Main Main i-Cruit is ilungelo lokuhamba kwiSonto le-Daytona. Ifoto © Adam Booth
Iveki ye-Daytona Bike imithendeleko yenziwe ngokubanzi kwimihlaba embalwa edlulileyo, kodwa iStrat iStrans isigxina senkcubeko yesiganeko.
I-cavalcade yezikolo ezithatha izithuthuthu ezihamba ngeyona ndlela yezithuthi ezihamba phambili zinika uhlobo lwazo lwemiboniso engabonakaliyo, ngelixa amaqabane angabonakaliyo afana neFroggy's Saloon, i-Broken Spoke Saloon kunye ne-Boot Hill Saloon inika yonke into esuka kumculo odlalayo kunye nemincintiswano yokutshatyalaliswa kwimincintiswano.
Xa usuphelile ukuhamba, qaphela apho ubeka khona ngexesha leVeki yeeBhakeki: indawo ekhethiweyo iyanqabile, kwaye iindawo zokupaka ngezinye iinkhathi zifuna uhambo olude olujikeleze ibhloko.
Jonga iRadio Races
Ukukhawuleza kuyingxenye ebalulekileyo yeveki ye-Daytona Bike, njengoko ibhalwe kwi-Rolex Daytona 200. Ifoto © Brian J. Nelson / Ducati
I-Rolex Daytona 200 yenye yeentlanga ezihloniphekileyo kwixesha le-AMA, kwaye ke kuthiwa ngenxa yokuba isiqinisekiso esheshayo siyamkela i-Rolex entsha ye-brand.
Ngezihambeli ezifikelela kuma-200 mph e-finely-tuned 1,000 cc zezemidlalo, lo mjaho wama-57 ugqithisa i-course ye-3.51 yeendlela eziqhelekileyo.
Kukho iintlanga ezingama-600 ezibandakanya umzila ogqityiweyo we-Daytona.
Fumana umgodi, kwaye umatshini wokubukela usebenze ngeebhayisikili ngelixa udumo oludumileyo oludlulileyo kwi-scooters.
Hlangana namaHlathi akho
UJosh Hayes, uMelissa Paris kunye neqela labalingana basayina i-autographs kwiTente kaTsha. Ifoto © Adam Booth
Ubuntu obuninzi bexesha eliqhelekileyo lomcimbi we-Daytona, nakubantu abaqhelekileyo bebhasikidi abaphambili, abaze bazi ukuba ngubani oya kuphuma kuwo,.
Ukuba ingaba ngumgca wegodi kwimidyarho okanye ixutyaniswe phakathi kwabantu kwiMakethe, uya kufuna ukugcina iliso evulekileyo kubuntu abadumileyo bee-motorcycling personality.
Hlola inkqubo yeveki yeembonakalo ezihleliweyo kunye neeseshoni ze-autograph ukuqinisekisa ukuba ngubani.
Jabulela i-AMA Supercross Action
I-Weekt ye-Daytona Bike ye-AMA. Ifoto © Honda
I-Supercross iyinqonqqqqqha ekhuphayo, eqhutywe ngamagxathu e-motocross-based edlalwa ngokuqhelekileyo kwibala lezemidlalo kwaye iyanqabana. Ngezenzo zalo ezingapheliyo kunye nokuhlamba okumangalisayo, kunzima ukuthobela ukusebenza kwe-AMT Supercross ka-Daytona.
Musa ukulibala; kunye namabala amaninzi ngokukhawuleza ekulwela indawo ephezulu, kulula ukuphosakela kwezinye zexesha elihle kakhulu lezemidlalo.
Umzila weMidlalo yePlay
Abadlali bezithuthi zomgca wecala baqhubisana nendawo ephezulu. Ifoto © Harley-Davidson
I-Track track idibanisa izinto zokungcola kunye ne-oval, ukunikezela ngokukhawuleza kunye nokuncintisana okufutshane kwi-AMA Pro Harley-Davidson Intshuwalense yePlay Track Flat.
Iimpawu ezingenanto zeMidlalo yaseMelika ezichanekileyo zidlalwa yi-Harley-Davidson.
Khangela i-International Motorcycle Show
I-bike yesiko ebonakalayo kwi-IMS. Ifoto © Basem Wasef
I-Daytona idla ngokumiswa kokugqibela kwe-International Motorcycle Show, kwaye ngokungafani neendawo zayo zangaphambili, le nto ayifaki imali yokungena. Ukususela kwimiboniso yebhayisikili yesiko kumasifundisane kunye neemveliso zakutshanje ezivela kubhayiseki kunye nabakhi bezinto, zihlala zikhona into ekubonayo kwi-IMS.
Hlola ishedyuli ukwenzela ukuba uye kwiindawo ezizodwa.
Gawk kwi-XDL Stunt Show
Ibhola le-XDL yelizwe eli-Bill uBill Dixon ugxotha i-Yamaha R6 yakhe kwiveki ye-Daytona Bike ka-2011. Ifoto © Adam Booth
Abaqeqeshi be-stunt abakwaziyo ukwenza izinto ngeebhayisikili ezibonakala zingayithobeli imithetho ye-physics, kwaye abafana (kunye namantombazana) abaphumelela kwi-XDL Championship Series baphezulu kwimidlalo yabo.
Jonga lo mboniso webholeji wezemidlalo ezimbini, kodwa ungazami lokhu ekhaya-ezi zigulo ezigula kakhulu!
I-XDL ibonakalisa indawo yendalo ekhuselekile apho abaqhubi bavame ukuxhoma ngaphandle kwezenzo; ukuthetha nabo kakuhle, kwaye abaninzi baya kuvuyela ukuthetha ngesitayela sabo sokugibela kunye nento eyenza izithuthuthu zabo ziguquke.
Abavelisi kunye neenkampani zamagatya zimelelwe kakuhle kwi-Marketplace ye-Daytona Bike Week. Ifoto © Adam Booth
Ukuzalisa izizathu ezinkulu ezikufutshane ne-Daytona International Speedway, i-Bike Week Marketplace ibonisa yonke into esuka kubadayisi bamama kunye nabaphambili kubaphambili.
Unokwenza konke ukususela kwi-demo ukukhwela ukukhangela iigesi, bonke bencediswa yi-reps yeenkampani abangaphezu kokonwaba ukukuzalisa kwimveliso yakutshanje kunye neyona mveliso.
Yizisa izicathulo zakho zokuhamba; kukho indawo eninzi yokufihla apha, ingakumbi ukuba ufuna ukubona yonke into.
Konke okufunayo ngu-$ 3 ukukhwela iisanti ze-Daytona Beach. Ifoto © Adam Booth
Isitalato esona sikhulu sinokubakho iibhloko ezimbalwa ukusuka elunxwemeni, kwaye ukuba uke ucinge ngokukhwele isithuthuthu sakho esihlabathini, nasi ithuba lakho!
Yenza i-$ 3 kwishintsho kunye nomthamo ophilileyo wokuzibamba; Umda wejubane othunyelwe nge-10 mph, kwaye ukuthotyelwa ngokuqhelekileyo kusondela kufuphi ukuze ugcine wonke umntu phantsi kolawulo.
Akukho nqongophala yabalinganiswa abanomdla kwiveki ye-Daytona. Ifoto © Adam Booth
Ngomnyaka onobuhle, isixeko saseSttona Beach sibona isigamu sezigidi zabantu singena ngaphakathi kwimida yesixeko malunga neentsuku ezisixhenxe.
I-Motorcycling ijwayele ukutsala abathandi bokuphila obunomdla, kwaye akukho nto inqongophala yabantu abanemibala yokugcina unomdla xa udibanisa kwimikhosi. Okona luhle kunabantu ababukeleyo, bangajongi ngaphaya kweSitalato esikhulu (jonga # 1) -iyona nto inyibilikiyo yabantu abathile abaza kubonwa kuyo.
Njengokuba uzama njengokungathi uzama, zama ukujonga; akuhloniphekanga, kwaye ngaphandle koko, kukho umntu ohlala ecaleni kwekona.
Kutheni Ndiyishiya I-Pin 8?
U-Elvis Presley: Iingcaphuno eziMbula uMntu
Udliwano-ntetho: UTim Hanley Umbhali we "Uphando lweLois Lane"